သင့်ကလေး ပထမဆုံးပြောမည့် စကားလုံးများ - Hello Sayarwon
HelloSayarwon » ကလေးပြုစုစောင့်ရှောက်ခြင်း » မိဘများအတွက်လမ်းညွှန် » သင့်ကလေး ပထမဆုံးပြောမည့် စကားလုံးများ
ကလေးများဟာ စကားလုံးတွေကို သေချာ မပြောနိုင်သေးခင်မှာ ပြောသမျှဟာ အဓိပ္ပါယ်ကောက် မရဘဲ တတွတ်တွတ်ပြောနေခြင်းပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒါဟာ အဓိပ္ပါယ်မပေါ်သေးပေမယ့် ကလေးတွေရဲ့ ဘာသာစကား ဖွံ့ဖြိုးမှုအတွက်တော့ အရေးကြီးတဲ့ မှတ်တိုင်တခုပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒါဆိုရင် ဘယ်အချိန်မှာ သူတို့ဆီက စကားလုံးတွေကို ပီပီသသကြားရပါမလဲ?
ဒီဆောင်းပါးမှာ ကလေးတွေ ပထမဆုံး ပြောတတ်တဲ့ စကားတွေအကြောင်း၊ သင့်ကလေးရဲ့ ဘာသာစကား စွမ်းရည်ကို ဖွံ့ဖြိုးဖို့ ဘယ်လိုကူညီရမယ့်အကြောင်း ဖော်ပြပေးပါမယ်။
ဘယ်အချိန်မှာ ကလေးတွေ ပထမဆုံး စကား စပြောသလဲ
ကလေးများ စတင်ပြောဆိုတာကတော့ စကားနဲ့ မဟုတ်ပါဘူး။ မွေးပြီးခါစမှာ ငိုယိုခြင်း၊ အော်ဟစ်ခြင်း၊ မအီမသာဖြစ်၍ အသံပြုခြင်း စတာတွေပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ နောက်လတွေမှာတော့ အောက်ပါအတိုင်း ဖွံ့ဖြိုးလာပါလိမ့်မယ်။
၃လအရွယ် ကလေးတွေဟာ သင့်စကားပြောတာကို ကြည့်နိုင်ပြီး နားလည်းထောင်တတ်ပါတယ်။ ဒါ့အပြင် သီချင်းသံကို ကြားရတဲ့အခါ သိချင်းအလိုက်အတိုင်း သံယောင်လိုက်တတ်ပါတယ်။ ကလေးများဟာ သီချင်းသံကို မိခိင်ဝမ်းတွင်းမှာကတည်းက ကြားဖူးတာ ဖြစ်ပါတယ်။
၆လအရွယ်မှာ စပြောတတ်တဲ့ စကားကတော့ ဖေဖေ မေမေ ဆိုပြီး ဖြစ်ပါတယ်။ သူတို့နာမည်ကို ခေါ်ရင်လည်း တုံ့ပြန်တတ်ပါတယ်။ အဲဒီအချိန်မှာ ကလေးတွေဟာ သူတို့ရဲ့ မူရင်းဘာသာစကားကို မှတ်မိနေပြီဖြစ်ပြီး သင်ပျော်နေသလား၊ မပျော်ဘူးလားဆိုတာ အသံနေ အသံထားကို ကြည့်ပြီး သိနေနိုင်ပါပြီ။
ဒီအရွယ်မှာတော့ ကလေးငယ်တွေဟာ ပိုပြီး ရှည်လျားတဲ့ အက္ခရာသံတွေ၊ အသံအနိမ့်အမြင့်ကို ပြောလာနိုင်ပါတယ်။ ‘နိုး နိုး’ ‘ဘိုင် ဘိုင်’ စတဲ့ စကားတွေ ဖြစ်ပါတယ်။
ဒီအရွယ်မှာ ရိုးရှင်းတဲ့ စကားလုံးတွေကို ပြောနိုင်ပြီး သင်ခိုင်းတာတွေကို လိုက်ပါလုပ်ဆောင်နိုင်ပါပြီ။
အရာဝတ္တုတွေကို ပြောလိုက်တဲ့အခါ ညွှန်ပြနိုင်ပါတယ်။ အဆုံးသတ်အသံကိုလည်း လိုက်ပြောတတ်ပါတယ်။
၂နှစ်အရွယ်ကလေးဟာ စကားစု၊ ဝါကျ စတာတွေကို ပုံစံမကျပေမယ့် ပြောနိုင်ပါတယ်။ စိတ်ကူးများ စတင် ဖြစ်ပေါ်နေချိန် ဖြစ်ပါတယ်။
သင့်ကလေးရဲ့ စကားနဲ့ ဝေါဟာရတွေဟာ စာလုံးကစားနည်းတွေ၊ ဘာသာစကားနဲ့ ပတ်သက်တဲ့ ကစားနည်းတွေနဲ့ ထိတွေ့မယ်ဆိုရင် လျင်မြန်စွာ တိုးတက်လာနိုင်တဲ့အချိန်ပဲ ဖြစ်ပါတယ်။
သင့်ကလေးကို စကားပြောချင်ရင် သင်ကလည်း စပြောသင့်ပါတယ်။
ဖြေးဖြေးပြောပြီး အရေးကြီးတဲ့ စကားလုံးတွေကို အဓိကထားပြောပါ
သင့်ကလေးလိုပဲ တချိန်လုံး ဗလုံးဗထွေး စကားတွေလိုက်ပြောနေစရာ မလိုပါဘူး။
အဲဒီအစား ကလေးပုံပြင် စာအုပ်များကို ဖတ်ပြပါ။ အရေးကြီးတဲ့စာလုံး၊ စကားလုံးတလုံးပဲရှိတဲ့ စာလုံးများကို အလေးထား ပြောပါ။
နာမ်စားများထက် နာမည်ကို ပိုသုံးပါ
ကလေးများဟာ မေမေ ဖေဖေ စတဲ့စကားလုံးနဲ့ တခြားနာမည်တွေကို ပိုရင်းနှီးနေတာကြောင့် ‘မင်း’ ‘ငါ’ စသော နာမ်စားများကိုမသုံးဘဲ နာမည်ပဲသုံးပါ။
ကလေးတွေကို ကာရန်ကဗျာများ၊ သီချင်းများနဲ့ သင်တာဟာ သူတို့အတွက် ပိုပျော်စရာကောင်းပြီး မှတ်မိလွယ်စေပါတယ်။
ဒါဟာ သင့်အတွက် ငြီးငွေ့စရာဖြစ်ပေမယ့် ကလေးတွေအတွက်တော့ သီချင်းကိုကြော့ပြီး ထပ်တလဲလဲဆိုခြင်းဟာ ပျော်စရာကောင်းပါတယ်။ သင့်ဆရာဝန်ဟာ ကလေးတွေရဲ့ နားလည် တွေးတောမှုကို ပိုပြီးအားကောင်းစေဖို့ အရာတခုခုနဲ့ ဆက်စပ်နေတဲ့ စာလုံးကို မှတ်မိစေဖို့ ကူညီပေးပါတယ်။
တည်းဖြတ်သည့်နေ့ ဖေ‌ဖော်ဝါရီ 15, 2018 | နောက်ဆုံးတည်းဖြတ်ခြင်း စက်တင်ဘာ 12, 2019
- Baby’s First Words. http://www.whattoexpect.com/first-year/first-words/ Accessed April 20, 2017
- Your baby’s first words. http://www.webmd.com/parenting/guide/baby-talk-your-babys-first-words#1/ Accessed April 20, 2017
ပြောစကားနားမထောင်တဲ့ ကလေး မေမေရိုက်မှာတဲ့လား